Man United, Man City, Liverpool, Real Madrid, Inter Milan & Guud ahaan kulammada caawa laga ciyaarayo tartammada kala duwan – Gool FM
(Yurub) 29 Jan 2020. Kulamo badan oo kala duwan ayaa caawa laga ciyaari doonaa qaaradda Yurub, waxaana la dheeli doonaa kulamo ka tirsan tartammo kala duwan sida Premier League, EFL Cup, Copa Del Rey iyo Coppa Italia.
Haddii aynu ku bilowno horyaalka xiisaha leh ee Premier League ayaa caawa la ciyaaraya waxaana halka kulan ee laga dheeli doono wada ciyaarayaha Liverpool iyo West Ham United, iyadoo kooxda uu hoggaamiyo Klopp ay booqanayso garoonka London.
Manchester United ayaa dhankeeda booqanayso naadiga ay ku xafiiltamaan Magaalada Manchester ee Man City, waxaana ay doonaysaa inay guul soo laabasho ah ku sameyso Etihad, kaddib markii kulankii hore ee EFL Cup-ka looga soo adkaaday 3-1.
Kulamo ka tirsan Copa Del Rey ayaa laga ciyaari doonaa Spain, waxaana kulanka la sugayo uu noqon doonaa midka ay Real Zaragoza oo dhoweynayso caawa Real Madrid.
Dhinaca kale hal kulan ayaa laga ciyaari doonaa caawa tartankada Coppa Italia, waxaana kulankaas wada ciyaari doona kooxaha Inter Milan iyo Fiorentina.
10:45 Habeennimo West Ham United vs Liverpool
10:45 Habeennimo Manchester City vs Manchester United
9:00 Habeennimo Leonesa vs Valencia
9:00 Habeennimo Rayo Vallecano vs Villarreal
11:00 Habeennimo CD Badajoz vs Granada
11:00 Habeennimo Real Sociedad vs Osasuna
11:00 Habeennimo Real Zaragoza vs Real Madrid
10:45 Habeennimo Inter vs Fiorentina